ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: Valentine's လက်ဆောင်
ရေးပြီးချိန်: 2/14/2009 06:24:00 PM
Happy Valentine to both of you !!
အမ်မလေး... ခုမှပဲ Blog ပေါ် ရောက်တော့တယ်ပေါ့လေ... ပြောသာပြောရ..အန်တ်ီတောင် လွမ်းသွားပြီ.. သူကလေးကို။ အကြောင်းသိဆိုတော့. :)
ညီမရေ- ကြည်နူးစရာလေး.. ကြားက..ခံစားပေးသွားပါတယ်။ ငယ်ဘ၀ တွေကို အသာပြန်ခြုံလို့ပေါ့။း)
မနော်... ကျေးဇူးပါ။ :)
အန်တီ... ပျင်းရမှာတောင် ပျင်းနေတာ ခုလို ထရေးလိုက်တော့လည်း နည်းနည်း ရေးလို့ ရသွားတာပေါ့လေ။ ;))လွမ်းတာတော့ လွမ်းပြီးရင်း လွမ်းပဲ။ ဟိ
မကေ... အသက်အရွယ် ကြီးတာ၊ ငယ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုလား။ :D
လွမ်းတုန်းပဲလား၊ ဘယ်တော့ မုန့်စားရမှာလဲး)
လာမယ်၊ ကြာမယ်ပေါ့ဗျာ။ :P ကျေးဇူး။
မနာလိုဘူးဗျို့....။ :D :P
အန်တီခင်... တနေ့နေ့၊ တချိန်ချိန်တော့ စားရမယ် ထင်ပါရဲ့။ :P
မောင်လေး Black Dream... မနာလိုဘူးဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ =))